တုပ္ေကြးကုိ အျပဳတ္တုိက္မည့္ၾကက္သြန္ျဖဴ. | Lwin Pyin News | Buzz News
ေရေႏြးပူပူအတြင္းသို႔ ၾကက္သြန္ၿဖဴဥ သံုးဥခန္႔ကို ခ်င္း(ဂ်င္း)၊ အာလူး၊ မုန္လာဥ၊ င႐ုတ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ စြပ္ၿပဳတ္လုပ္၍ ပူပူေလး ေသာက္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာ၍ ဖ်ားၿခင္း၊ တုပ္ေကြးမိၿခင္းတို႔ကို အၿမန္သက္သာေစပါသည္။
တုပ်ကွေး ကို အပြုတ်တိုက်မည့်ကြက်သွန်ဖြူ.
ခေတ်အဆက်ဆက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော သုတေသနစမ်းသပ်ချက်များအရ ကြက်သွန်ဖြူသည် ရောဂါပိုး အမျိုးမျိုးကို သေစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ်ကြက်သွန်ဖြူသည် အအေးမိ၊ နှားစေးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာ၍ ဖျားခြင်း၊ ပသိရောင်ခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိခြင်းကို အမြန် ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ရေနွေးပူပူအတွင်းသို့ ကြက်သွန်ဖြူဥ သုံးဥခန့်ကို ချင်း(ဂျင်း)၊ အာလူး၊ မုန်လာဥ၊ ငရုတ်ကောင်းတို့နှင့်အတူ စွပ်ပြုတ်လုပ်၍ ပူပူလေး သောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် လည်ချောင်းနာ၍ ဖျားခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိခြင်းတို့ကို အမြန်
ဒေါက်တာအောင်နိုင်(ဆေးသုတေသန)မြန်မာမှု နှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာ စာအုပ်မှ တင်ပြလိုက်ပါသည်။